दिलदार उम्मेदवार दिल श्रेष्ठ | www.sidhakurausa.com
केहि खोल्छन की भनेर एक साता अघि फोन गरें उनलाई, फोन उठाउदै दिल खोलेर हाँसे र भने -सिधा कुराले आज मलाई सोझ्याउने बिचार गरेको हो की? मैले जबाफ फर्काएँ -सोझ्याउनु पर्ने केहि भए भन्नुस । हत्तर पत्तर उनले भने -मलाई एनआरएन एनसीसी युएसएको चुनावमा सोझ्याई दिनु होला । उनको त्यो सोझ्याईको अर्थ मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन तर उनले दिल खोलेर हाँसेको त्यो पलले भने एउटा संकेत गरिरहेथ्यो -समाजको लागि केहि गर्न चाहान्छु । ग्रेटर लस एन्जलसमा धेरैले चिन्छन उनलाई । उनि अमेरिकाका अन्य राज्यहरुमा पनि चिनिन चाहान्छन । नेपाली समाजको लागि केहि गरेर देखाउने, न की बोलेर हैन भन्ने कुरा नै उनको मूलमन्त्र रहेछ । १५ मिनेट जति उनिसंग कुराकानी भएको थियो र सिधा कुराले उनि दिलदार भएको पाएको छ । यिनै दिलदारसंग १० मिनेट जति उनको उम्मेद्वारी र समाजसेवा बारे गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप:
सिधा कुरा: दिल खोलेर हाँस्नुको अर्थ चाहि?
दिल श्रेष्ठ: समाजको लागि दिल खोलेरै केहि दिन सक्छु भन्ने अभिप्राय हो ।
सिधा कुरा: सधै यस्तै हो की?
दिल श्रेठ: सधै यस्तै हो, हांसी खुसि दिलले नै समाजका लागि केहि गर्न सकिन्छ ।
सिधा कुरा: समाजका लागि के के गर्नु भयो त?
दिल श्रेठ: त्यति धेरै त गर्न सकेको छैन । तर पनि ग्रेटर लस एन्जलस क्षेत्रमा रक्तदान, नेपाली चलचित्र प्रदर्शन, च्यारिटी शो र सांगीतिक कार्यक्रमहरुलाई टेवा दिने काम भने गर्दै आएको छु । हामी जहाँ रहे पनि सामाजिक दायित्व बहन गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सचेत रहनै पर्छ ।
सिधा कुरा: लस एन्जलस क्षेत्रमा निर्बाह गरेको सामाजिक दायित्वले अमेरिका भरको लागि हुने चुनाव जितिन्छ त?
दिल श्रेठ: यो एउटा उदाहरण मात्र हो, फेरी शुरुवात त हरेक व्यक्तिले आफु बस्ने ठाउबाटै गर्ने हुनाले मेरो सामाजिक दायित्व लस एन्जलसबाट शुरु भएको हो ।
सिधा कुरा: तपाइको यो सामाजिक दायित्व अमेरिकाको अन्य भागमा चाहि कसरि सोझ्याउने त?
दिल श्रेष्ठ: चुनावको माध्यमबाट एनआरएन अमेरिकामा प्रवेश भए पछि गरेर देखाउने छु । त्यस अघि पनि मिलेसम्म मेरो सहयोग हुन्छ । लस एन्जलस र अमेरिकाका जुनसुकै भागमा बस्ने नेपालीहरुका समस्यामा ध्यान आकर्षण गर्नेछु ।
सिधा कुरा: सामाजिक दायित्व अमेरिकाको नेपाली समाजका लागि मात्रै की नेपाल तिर पनि?
दिल श्रेष्ठ: नेपाल त आफ्नो मातृभूमि नै भएकाले उतातिर केहि नगर्ने भन्ने कुरै छैन । हिमालय फाउन्डेसन मार्फत गर्दै आएका सेवाहरुलाई निरन्तरता दिनेछु । बिद्यालय निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, कम्प्युटर वितरण लगाएतको माध्यमबाट कम्तिमा आफुले पढेको बिद्यालयलाई हरेक नेपालीले केहि गर्नु पर्छ भन्ने सोच अगाडी ल्याउने मेरो योजना छ । यसो हुँदा सरकारको मात्र भर पर्नु नपर्ने हुन्छ र गाउका बिद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि ठुलो मद्दत हुन जान्छ ।
सिधा कुरा: तपाइका यी सामाजिक दायित्वहरु र सह-सचिब पदको जिम्मेवारी मेल खान्छ त?
दिल श्रेष्ठ: यी मेरा एजेन्डाहरु हुन, म त्यो पदमा बसेर पनि निरन्तर केहि गर्न चाहान्छु भनेको मात्र हो, सहसचिब पदसंग मेल खाए पनि नखाए पनि समाजसेवामा हाम्रो दायित्व केहि कुराले रोक्न सक्दैन भन्ने लाग्छ । फेरी सह सचिबमा सोझ्याउनु भयो भने त मैले मात्र होइन अन्य मित्रहरुलाई समेत साथै लिएर हिड्न मलाई त्यो पदले सहायता गर्नेछ । अहिले म एक्लै छु त्यो बेला हामी हुन्छौ र त्यस्ता धेरै कामहरु गर्न सक्छौं ।
सिधा कुरा: अनि चुनाव जितिन्छ त?
दिल श्रेष्ठ: चुनाव ढुक्कसंग जितिन्छ । धेरै उम्मेदवारहरु र मतदाताहरुले मलाई चिन्नु हुन्छ भने चुनाव जित्न त्यति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
यिनै हुन दिलदार सह-सचिब पदका उम्मेदवार दिल श्रेष्ठ, अहिले सामाजिक र सामुहिक दायित्वका कुरा गर्नेहरु चुनाव जिती सके पछि ”हामी” शब्दलाई ”म” मा परिणत गरि निस्क्रिय नहुन, सिधा कुरा यहि चाहान्छ ।